Warqada Muddada Tacliinta ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Waraaqda Muddada Tacliinta ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Adeegyada Warqadda Muddada Waxbarashada
Hal dariiqo oo weyn oo loogu talagalay waraaqahaaga muddada-tacliimeed in si sax ah loo sameeyo ayaa ah in la shaqaaleeyo qoraa warqad xilliyeed tacliimeed oo habboon adiga oo ku wakiil ah. Isbadalkan wuxuu qaadan doonaa waqti in lagu fahmo qaabka saxda ah ee nidaamka qorista ereygan tacliinta. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo helo adeegga ereyga tacliimeed ee saxda ah, markaa qodobkan ayaa caawin kara.
Waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso markaad iskudayeyso inaad hesho adeega waqtiga saxda ah ee warqada waa inaad hubiso inaad dooratay adeega ugu haboon ee ku saleysan nooca warqad xilliyeed tacliimeed ee aad ubaahantahay Waxaa jira saddex nooc oo aasaasi ah oo ah waraaqaha ereyga tacliimeed: waraaqaha teesarrada, waraaqaha cilmi baarista, iyo buugaagta. Qeybahan waraaqaha ah ayaa sida caadiga ah lagu kala saaraa iyadoo loo eegayo dhererka waqtiga ay ku qaadanayso inay dhammaystiraan.
Qoraalka ama warqadda cilmi baaristu aad ayey u dheer tahay. Badanaa waa dukumiinti qoran oo dheer oo looga baahan yahay ardayda baranaya maadada tacliinta. Qoraalku waa inuu qaataa dhowr bilood haddii aad qoreyso hawl keliya. Dhererka warqaddan ereyga aqooneed waxaa go'aaminaya hay'adda aad ku qoraysid dukumintiga.
Si aad u qorto warqad erey tacliimeed, waxaad marka hore u baahan doontaa inaad fahamto mawduuca ama mawduuca aad isku dayeyso inaad ka hadasho. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad eegto howsha lagaa rabo inaad ku dhammaysato hawsha. Meelayntu waxay badanaa kuu sheegi doontaa nooca warqadda looga baahan yahay inaad qorto, iyo inta waqti ee aad ku dhammaysanayso hawsha.
Markaad raadineyso inaad kireysato adeeg warqadeed oo erey tacliimeed, hubi inaad raadiso kuwa takhasuska sare leh. Haddii aad kireysato adeeg guud, markaa mahelaysid adeegga tayada leh ee aad kafilayso adeeggan gaarka ah. Habka ugu fiican ee lagu helo adeeg wanaagsan oo loogu talagalay qorista ereyga tacliimeed waa in la shaqaaleeyo mid ku takhasusay arimahan. Waa inaad raadisaa kuwa aqoonta leh si ay u fahmaan dhamaan nidaamka waraaqdaada tacliimeed si ay kuugu diyaariyaan warqadda ereyga tacliimeed ee saxda ah.
Markaad isku dayeyso inaad hesho erey tacliimeed eray bixin tacliimeed, waxaa muhiim ah inaad fiiriso nooca caawimaad ee ay ku siinayaan. Waxaad ubaahantahay inaad hesho caawimaad khibrad uleh inaad kahesho dadka kale inay qoraan waraaqaha tacliinta sida buugaagta iyo buugaagta, qoraalka, iwm. Tani waxay hubin doontaa inaad awoodid inaad lashaqeysid qof fahamsan baahidaada aqooneed ee qorista noocan ah dukumiintiga tacliimeed.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso in adeeggu yahay mid la awoodi karo oo la isku halleyn karo. Xusuusnow, inaadan rabin inaad waqti iyo lacag ku lumiso shaqaaleynta adeeg aan ku siin doonin adeeg tayo leh. Hubso inaad tixgeliso sumcadda adeegga markaad go'aan ka gaareyso cidda aad shaqaaleyneyso.
Mar alla markii aad hesho adeegga warqadda ereyga tacliimeed ee saxda ah oo si fiican uga shaqeyn doona baahiyahaaga, waxaa muhiim ah inaad la xiriirto iyaga ka hor intaadan billaabin qorista warqadda xilli-waxbarasheedkaaga. Waxaad u baahan doontaa inaad kala hadasho faahfaahinta hawshaada iyaga, iyo sidoo kale wixii isbeddel ah ee aad rabto inaad sameyso. Hubso inaad ka codsato inay kuu soo diraan qiyaastooda iyo qandaraaska ay ku jiraan heshiiska.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo warqad erey bixin ah ah, iyo noocyo kala duwan oo adeegyo ah oo la shaqaalayn karo si ay kaaga caawiyaan qorista ereyga ereyga. Adeegyadan waxaa ka mid noqon kara tafatir, dib u akhrin, iyo xitaa dib u qoris. Haddii aad shaqaaleyso adeeg bixiya adeegyadan, waxay kaa badbaadin doontaa waqti iyo dadaal badan aakhirka. Waxay awoodi doonaan inay ku siiyaan caawimaadda aad u baahan tahay markii aad ugu baahan tahay.
Waxaa jira qaabab badan oo aad ku heli karto macluumaad ku saabsan warqadda ereyga tacliimeed ee aad isticmaali doontid. Waxaad ka eegi kartaa khadka tooska ah, waxaad ka akhrisan kartaa buugaagta ku saabsan noocyada kala duwan ee ereyada tacliimeed, waad booqan kartaa maktabadaha, waxaadna la hadli kartaa borofisarkaaga ama macallinkaaga. Wax kasta oo aad go aansato, waxaa muhiim ah inaad heshid caawimaadda aad u baahan tahay markaad ka shaqeyneyso shaqo.
Waxaa jira dad badan oo ka faa'iideysan doona shaqaalaynta adeegsiga ereyga ereyga tacliinta si ay uga caawiyaan inay qoraan warqadda tacliinta ee ay ugu baahan yihiin in lagu aqbalo barnaamij shahaado gaar ah. Waa inaad waqti siisid si aad uhesho adeeg tacliimeed oo wanaagsan si aad uhesho kaalmada aad ugu baahan tahay inaad ku qorto warqaddaada waxbarasho.